Alterian SDL | SM2 mhinduro yemagariro enhau inopa makambani kuoneka mukuvapo kwavo munzvimbo yemagariro uye inoratidza uko kutaurirana kwakakodzera kuri kuitika, ndiani ari kutora chikamu, uye zvinofungwa nevatengi nezvazvo.
Muvambi Mark Lancaster anotsanangura kuti nei SDL iri yakakosha kushambadziro yekambani yako pamhepo:
Ichi chishandiso chine kumhanya kwese kweguyo mashandiro ayo akawanda maturusi mune yemagariro midhiya kushambadzira inopa, asi inoenda iyo yekuwedzera mamaira kuendesa zvimwe zvakaoma kuti uwane mashandiro akadai sekufungisisa kwemanzwiro, vhoriyamu rezuva nezuva, kiyi yekukurudzira uye nezvimwe. Nepo maturusi mazhinji achitarisa pane niche yenzvimbo yenzvimbo, Alterian SM2 iri pamba chaipo munzvimbo yepasirese yepasi rose, ichibvumira kuunganidzwa kwedata mumitauro yemitauro yakawanda, kushandura, kusanganisira mishumo yemafungiro, huwandu hwevanhu, nhepfenyuro enhau uye nezvimwe. Kuziva kuti manejimendi manejimendi manejimendi, uye zvemuno, zvine chekuita nezvakakosha chinhu chakakosha pakubata kwakanaka, ichi chinhu chakakosha kumakambani ane huvepo hwepasirese.
Makiyi maficha uye mashandiro e SDL | SM2:
Vhoriyamu Yemazuva ese - Edza ukuru hwekutaurirana kwemamwe maratidziro nekuvhara, tsanangura nguva yenguva dzinosanganisira nhoroondo yakachengetedzwa uye ugoisa mukati mekuvharwa kwezvakatumirwa kana zvirevo.
Mugove wezwi - Dzidza kuti ndezvipi zvinyorwa zviri kukanganisa zvakanyanya nhaurirano, ongorora zvemukati zvemukati zvakagovaniswa mumatanho mazhinji uye enzanisa mugove wehurukuro pamhando dzinoverengeka kuti unzwisise chiri kufambisa hurukuro.
Enzanisa Mazuva - Ongorora mabhaisikopo ehurukuro uchikwikwidza vakwikwidzi, tarisa kuti misoro inofamba sei nekufamba kwenguva mukuenzanisa, tarisa padivi-ne-padivi kuenzanisa, chinzvimbo chakanangana nemakwikwi ekupa zvibodzwa uye mabhenji achipikisana nemaindasitiri.
madingindira - Tsvagurudza nyaya dziri kukurukurwa pamusoro pechako chiratidzo, vakwikwidzi kana maindasitiri, nzwisisa chaicho vateereri kufarira kwakasarudzika, simbisa mazwi akakosha anoshandiswa nenzira kwayo mukati mekutsvaga setup.
Demographics - Ziva nzvimbo dzine hunyanzvi, mablog uye vanhu, chidimbu nekuzivikanwa, mukadzi uye zera remunyori.
Author Tags - Enzanisa tag mazwi akakosha pakati peako marangi uye vakwikwidzi, nzwisisa zvakajairika madingindira uye kukura kwehurukuro, uye uone niche mazwi akakosha eSEO.
Mepu Yakafukidzwa - Nzwisisa ukuru hwekutaurirana kumatunhu akasiyana siyana, tsaura nzvimbo dzekutaurirana dzakasiyana siyana uye wodziisa pasi kuti ududzire mamiriro ehurukuro.
Tarisa Mishumo - Kuzivisa kuzivisa nekudzvanya kamwe chete kunovimbisa kuti hauzorovhi chinhu chakakosha kana chinyorwa, kuwana mukana kune chaiwo mazwi mune chaiyo-nguva uye kugona kugara uchiziva pane zvinopisa misoro uye nekuita nekukurumidza.
Mafungiro Mishumo - Gauge mutengi chiratidzo chekuona kana manzwiro kushambadziro, nzwisisa kugoverwa kwemanzwiro kwechiratidzo pane yakatarwa nguva uye gadzirisa mafungiro akanangana neindasitiri kana brand.
Muchidimbu, Alterian SM2 inopa ruzivo runodikanwa kuti ubatsire kuziva vavariro yako vateereri, nharaunda dzakakodzera, vanokurudzira mukati meako musika wekutengesa, uye mepu yemigwagwa yenzira dzakasiyana dzekuita navo. Inopa mhinduro yakakosha uye ruzivo rwezvazvino kuitika uye zviitiko zvine chekuita nekara rako, uye yakawanda yeruzivo rwekutanga inodiwa kuronga zvinobudirira zvemagariro enhau sechikamu chehurongwa hwese hwekutengesa.
Tags: shandurichinja sdlchinja sm2sdlsm2evanhu vezvenhausocial media njeresocial media chikuva
Votigo Inowedzera kune Yakakwana Yemagariro Ekushambadzira Platform
NetBase: Enterprise Yemagariro Ehungwaru Platform
shamwari dzako dzevanhu
Jul 23, 2012 pa 1: 23 AM
Paunotenga Facebook Fans huwandu hwevashanyi kune peji rako zvakaringana saiti yako ichawedzera, zvichiita kuti iwe ushandise zvakanyanya nzvimbo yeruzhinji pasocial network kuwedzera mari. Huwandu huri kuwedzera hwevanhu parizvino vanoshandisa nzvimbo dzeveruzhinji dzekushambadzira mukutenga kushamwaridzana neshamwari uye nemhuri. Nenhamba isingaverengeke yevatengi vanovhura network zuva rega rega iwe une risingaperi rinotarisira kuratidza yako kambani, masevhisi uye zvinhu kune vangangove vatengi pasirese.
Jul 23, 2012 pa 9: 45 AM
Tiri kushandisa SDL Alterian SM2 yevatengi vedu kweanenge makore maviri. Ndicho chishandiso chakanakisa cheSocial Media Analysis uye vatengi vedu vanonzwisisa kukosha kweSM2 iri nani nekure kupfuura chero chikuva chinozivikanwa uyezve inoshanda mumitauro yakawanda. Ida chishandiso ichi!